ဖြိုး အလ်ဝိုင်: သန်းရွှေနှင့် ဂေါတာမ လုပ်တာမဟုတ် မဟုတ်တာလုပ်
ယခုအကြောင်းအရာသည်ခေါင်းစီးနှင့် လွဲကောင်းလွဲနိုင်သည်........ ဂေါတာမ၏ဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိတွင် ပြောစရာများစွာရှိပါသည်...... သို့သော်လည်း နှစ်ခုပေါင်း၍ ခေါင်းစီးတစ်ခုတည်းနှင့် တင်လိုက်ပါသည်.......မဲနိုင်သူများကို ဤမျှနှင့်သာနှစ်သိမ့်လိုက်ပါသည်။
ကျတော်ရေးထားသော စာကို ယခုဖတ်နေသောသုငယ်ချင်းသည် သေရမှာ သိပါသလား??????? အိုရမှာ သိပါသလား???????? နာရမှာ သိပါသလား???????? သင်သည်မသိသေးလျှင် သင်အနီးအနားကရှိသော ခလေးငယ်တစ်ယောက်ချီးကို စားလိုက်ပါ……… ကျတော်ငယ်စဉ်ကကျတော့်အဘိုး၏ အကို အဘိုးကြီးတစ်ယောက်ဆုံးပါးသွားတော့ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေငိုလိုက်ကြတာ ဦးလေးတွေ အဒေါ်တွေငိုတော့ ကျတော်က ပထမကတော့ ကြောင်အမ်းအမ်းနဲ့ နောက်တော့ ငိုချင်လာကော ငိုချလိုက်တယ်...................
နောက်တစ်ကြိမ်ကျတော့် အဒေါ်အရင်းအချာတစ်ယောက် ဆုံးပါးသွားတော့ တကယ်ကို နားလည်စွာနဲ့ ၀မ်းဝမ်းနည်းနည်းကို ငိုချင်လာတာ ကျတော့်ညီအကိုမောင်နှမ၀မ်းကွဲတွေဆို အမေဆုံးတော့ ဘယ်ပြောကောင်းမလဲ.............
တော်တော်ငိုကြတာပေါ့ သူတို့ဝမ်းနည်းမူတွေက ကျတော်ဆီကိုပါ ကူးစက်လာတာ ၀မ်းကွဲတွေသာဆိုတယ် အရင်းအချာလိုပါပဲ ဆုံးပါးသွားတဲ့အဒေါ်ဆိုလည်း ကျတော့်ကို မုန့်ဖိုးပေးနေကြ အဒေါ်ကိုသံယောဇဉ်ဆီလည်း ရှိတယ် ကျတော်ဦး၊အဒေါ်ထဲမှာဆိုရင် ကျတော်အခင်အတွက်တာဆုံးအဒေါ် ……. အဘိုးကြီးနဲ့အဒေါ်ကြီးဆုံးတာ လေးငါးခြောက်လ လောက်ပဲကွာမယ် အဲဒီအချိန်ကကျတော် ရှစ်နှစ်ခွဲကိုးနှစ်လောက်ရှိပြီ…….
ဒီအချိန်မှာကတည်းက ကျတော်ဟာ သေရမှာကို တော်တော်ကြောက်နေပြီ အကြီးတွေက ပုံပြောပြရင် သေရမှာ ပါတာတို့ ပြောရင် အဲဒီပုံပြင်ကျတော်ဆက်နားမထောင်တော့ဘူး……. သူငယ်ချင်းတွေကစားတဲ့အခါ ကျတော့်ညီလေးကို သူငယ်ချင်းက သေနတ်ပစ်ရင် သေရမယ်ပြောတော့ ကျတော်က ကျတော့်သူငယ်ချင်းကို “မင်းသေလိုက်ပါလား ငါ့ညီကို မသေခိုင်းနဲ့” ကျတော့်သူငယ်ချင်းက “မင်းကလည်းကွာ ဒါက ကစားတာလေကွာ တကယ်သေတာမှ မဟုတ်တာ” ပြောတော့ ကျတော်က “မရဘူး” ဒီလိုနဲ့ ငြင်းကြခုံကြရင်းနဲ့ ကစားတာဟာ ပျက်ခဲ့ရတာကို ကျတော်ယခုအချိန်တိုင် သတိရနေတုန်းပဲ။
ကျတော်ဘာပြောချင်တာလည်းဆိုတော့ ကျတော်ဟာ ရှစ်နှစ်ကိုးနှစ်သားအရွယ်လောက်ခတည်းက သေရမယ်ဆိုတာကြီးကို သိနေပြီ.......
ဒီအရွယ်မှာခတည်းက ဖေကြီးသေရမှာ ဘာလဲ မေကြီးသေတယ်ဆိုတာဘာလဲ ဆိုတာ ကျတော်မမေးတော့ဘူး ကောင်းကောင်းကိုနားလည်နေလို့ သေရမယ်ဆိုတာကြီးကိုတောင် ကြောက်နေတယ်…… ကျတော်ခင်တွယ် ချစ်ခင်ရတဲ့ မိဘဆွေမျိုးသားချင်း မောင်နှမတွေ ဆုံးပါးသွားမှာ တွေးရင်းနဲ့ကို ကြောက်နေမိတာပါ….. ဒါပေမဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားစွာပြောနေကြတဲ့ ငတုံးများကိုးကွယ်နေတဲ့ ကုလားဂေါတာမကတော့ အသက်၂၉နှစ်အ၇ွယ်ရောက်မှ သေရမှာ နားလည်ပါတယ်…… ဟဲ့ မောင်စံ ဟိုဟာကြီးက ဘာလဲ ဒီဟာကြီးက ဘာလဲလို့ မေးနေရတာပါ
(မူရင်းမှာ မောင်စံလို့ မရေးထားပါဘူး ပေးထားတဲ့နာမည်ကလည်း မောင်စံတဲ့ မောင်စံဆိုလို့ပြောရအုံးမယ် ကျတော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေမှာ လူမင်း၊၊ဒွေး၊မင်းမော်ကွန်း စသဖြင့်နာမည်မှည့်ခေါ် ကြတယ်။ ယောင်္ကျားသားလေးများကိုဟဲ့ဒွေးမ၊ ကျော်ဟိန်းမ၊မင်းမော်ကွန်းမလို့ခေါ်လား မခေါ်ပါဘူး။ စွာကျယ်မ၊ ဂျမ်းစိန်မ၊အာကျယ်မ၊ဂေါလီမစသဖြင့်ခေါ်ဆိုကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ထူးထူးခြားခြား ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ ကိုးကွယ်နေတဲ့သူရဲ့နာမည်မှာ ဂေါတာမတဲ့။ နာမည်အနောက်မှာမပါနေတယ် ဒါဆိုရင် ဒီလူကတော့ခြောက်ရင်ခြောက် မခြောက်ရင်တော့ အမကြီးပေါ့ ဝါးဟာဟားဟား)
တော်တော်လည်းသနားဖို့ ကောင်းပါတယ်.....အသက်သာကြီးပြီး ဦးနှောက်အသိဥာဏ်က ဖွံ့ဖြိုးမူကခလေးငယ်တစ်ယောက်၏ အတွေးအခေါ်မျှသာရှိပါသေးတယ်..... ဂတုံးများကို ဒီလိုပြောတော့ ဂတုံးများက ဘယ်လိုဆင်ခြင်ပြန်ပေးလဲဆိုရင် ဂေါတာမ၏ဖခင်က ဂေါတာမဟာအသက်အရွယ်ကြီးရင်ဘုရားတရားအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကြိုသိထားလို့ ငယ်စဉ်ကတည်းကဂေါတာမကို မိန်းမပေးစားလိုက်တယ်.....
လောကစည်းစိမ်မှာပျော်မွေ့အောင်သိမ်းသွင်းထားတယ်......... ဒါကြောင့်သူ့မှာအပြင်ဗဟုသုတဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူး သေရမှာလဲမသိ နာရမှာလဲမသိတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေရတယ်လို့ စောဒကတတ်ပါတယ်....ဟုတ်ပါပြီ ဟုတ်ပါပြီ မွေးမွေးချင်းခြေခုနှစ်လှမ်းလှမ်းတာကြတာ ဘယ်သူကသင်ပေးလို့ ထလမ်းလျှောက်နိုင်တာလဲ????????????????
မညီညွှတ်တာပါ ကြွားချင်တာကလည်းစောက်ရမ်းစာဖတ်တတ်တဲ့သူနဲ့တွေ့တော့ စောက်တလွဲကျမ်းဖြစ်သွားရတာပေါ့.......
ရဲဘော်တို့ဒီနေ့ဟာ နေ့ထူးနေမြတ်ဖြစ်တယ်....ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ရဲဘော်တို့ဟာရဲဘော်တို့ဖြစ်တယ်.....(ဒီနေ့ဟာနေ့ထူးနေ့မြတ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ ဘာများဆက်ပြောမလဲလို့နားထောင်ကောင်းနေတာ ဘိုးဘိုးရယ်..... အဲဒီလောက်ထိလူတွေမတွေးနိုင်တဲ့စကားတွေ မပြောနဲ့လေဗျာ ဟားဟား)
ပုံ ဦးသန်းရွှေ (ဆရာတပည့်တော်တွေ လေသံကတစ်ပုံစံတည်း ခပ်တုံးတုံးလေသံတွေ)
လူဟာသေရမယ် နာရမယ် အိုရမယ် (ဟုတ်ပါတယ် အစကကျတော်တို့ကသေရမှာနာရမှာအိုရမှာ မသိရှာတဲ့လူတွေဆိုတော့လေ ... .....ဟိုအပြစ်တင် ဒီအပြစ်တင် စကားလုံးများက မွဲပြာပုဆိုးများ...)
ပုံ ဒေါ်ဂေါတာမ (ဆရာကလည်း ခပ်ကြောင်ကြောင်သွန်သင်တော့ တပည်ကလည်း မှားပြီပေါ့)
သူတို့နှစ်ဦးအကြောင်းကို ယှဉ်ပြောရရင် စာကအရှည်ကြီးဖတ်တဲ့သူညီးငွေ့သွားနိုင်ပါတယ်။ (ဒေါ်)ဂေါတာမကလည်းသူ၏ဂိုဏ်းစတားဝင် ဂတုံးများကိုသာလှူဒါန်းဖို့ လှူရင်အဘယ်ကဲ့သို့အကျိုးကျေးဇူးများကို ရှေ့ဘဝတွင်ခံစားရမည်ဆိုတဲ့အကြောင်း စော်ကားလျှင်အဘယ်ကဲ့သို့ဘဝပေါင်းများကို ဒုက္ခခံစားရမည်ဆိုတဲ့အကြောင်းသာ သွန်သင်ပါတယ်။
ထို့အတူပဲ (ဦး)သန်းရွှေကလည်း သူ၏အထက်ပိုင်းအရာရှိများကိုလေးထားဆက်ဆံဖို့ အမိန့်ကိုနာခံဖို့ မနာခံလျှင်ဒုက္ခရောက်မည်သာဖြစ်ကြောင်း စသဖြင့်သွန်သင်ထားပါတယ်..... သူ၏မိသားစု၊ စစ်အသိုင်အ၀ိုင်းမိသားစုစသည့်တို့ကိုအလေးထား ဆက်ဆံရမည်..... သူ၏အသိုင်အ၀ိုင်းများနှင့် အတိုက်အခံပြုလုပ်ပါက လုပ်သူသည် ဧကန်ဒုက္ခကိုကြုံတွေ့ရသည်........